Daawo Sawirada Ardayda Jaamacadda SIMAD oo dad badan oo aragga la’ ulo u qaybisay - Wargeyska Faafiye
Home 2015 April 29 .Warka Daawo Sawirada Ardayda Jaamacadda SIMAD oo dad badan oo aragga la’ ulo u qaybisay
Daawo Sawirada Ardayda Jaamacadda SIMAD oo dad badan oo aragga la’ ulo u qaybisay
April 29, 2015 · by	Liban Farah ·
Boqol (100)Ruux oo ka mid ah dadka aragga la’ ee ku nool magalaada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa maanta maamulka iyo ardada jaamacadda SIMAD u qaybiyeen ulaha loogu talo galay dadka aragga la’.
Ardada iyo maamulka jaamacadda SIMAD ayaa waxaa ay u qorsheeyeen sanad walba bishaan oo kale in ay sameeyaan barnaamijyo ay ku caawinayaan bulshada danyarta ah ama ay uga qayb qaadanayaan hormarinta dalka, dadkaan 100 ka gaaraya ee maanta ay u qaybiyeen ulaha ayaa waxaa ay ku noolyihiin xaafadda Buulo xuubey ee degmada Wadajir.
Qaar ka mid ah ardada jaamacadda ayaa waxaa ay ka hadleen waxyaabaha ku dhaliyay in ay is xilqaamaan oo ay u soo baxaan in ay gar gaaraan dadkaas.
“Maalintaan waxaa la yiraa public Service Day waxaan ugu talo galnay in aan ka dhigno maalin aan bulshada danyarta ah u adeeegno,sanadkii hore maanta oo kale waxaan nadiifinay wadooyinka magaalada qaar oo aan qashinka ka qaadnay maanta dadka aragga la’ ayaan caawineynaa waana sii wadi doonaa” ayuu yiri mid ka mid ah ardayda.
Ardadan ayaa ugu baaqay dhallinyarada dhigta jaamacadaha kala duwan ee dalka in ay iyaguna fuliyaan howlo lagu caawinayo dadka dan yarta ah , gaar ahaan kuwa naafada ah.
“ Waxaan ugu baaqaynaa ardayda nala midka ah ee dhigata jaamadaha in ay iyaguna caawiyaan walaalahood dhibaateysan, gaar ahaan dadka aan laxaadkoodu dhammeyn”. ayuu yiri arday kale.
Dadka aragga naafada ka ah ee loo qaybiyay ulaha ayaa waxaa ay Mahad naq balaaran u jeediyeen bahda SIMAD oo ay ku amaaneen doorkeeda caawinta danyarta waxaana ay ugu baaqeen inta la midka ah in ay ku daysadaan.
Qof ka mid ah dadka la caawiyay ayaa yiri “Waan u Mahad naqeynaa maamulka iyo Ardada SIMAD runtii waxaan dhihi karnaa waxaa ay qaateen door muhiim ah waxaa ay noqonayaan jaamacadii ugu horeysay oo na soo gaarsiisa caawinaad caynkaan ah waxaan leenahay waad mahadsantihiin howshaas sii wada waxaan sidoo kale codsaneynaa in bulshadu Soomaaliyeed ay caawisi qofka wata ushaan”
Jaamacadda SIMAD ayaa sidoo kale ballan qaadday in ay waxbarasho jaamacadeed oo lacag la’aan ah siineyso ardayda dhammeysay dugsiyada sare ee ay dhaleen indhooleyaasha dan yarta ah ee ay maanta siiyeen ulaha, sida uu sheegay agaasimaha xiriirka guud ee jaamacadda SIMAD Cabdikariin Muxudiin Axmed.
“Howshaan aan maanta qabanay waxaa hormuud ka ahaa ardada jaamacadda waxaan u balan qaadeynaa waalidiinta aragga naafada ka ah hadii ay jiraan caruur ay dhaleen oo dugsiga sare ka soo qalin jabisay waxbarasho bilaasha ah ama lacag la,aan ayaan siineynaa” ayu yiri Cabdikariim Muxudiin.
Jaamacadda SIMAD waxay ka mid mid tahay Jaamacadaha dalka ee ka sokow waxbarashada, bixiya adeegyo waxtar u leh bulshada.
Xildhibaanada BF oo wali ka qeylinaya dastuurka cusub
Kenya oo celisay qaxooti kale oo Soomaali ah.
Koonfur Afrikaan nin Soomaali ah ku dilay Muqdisho oo ciidamada Dowladda qabteen.
Save the Children gaari u rarnaa oo la dhacay.